Kingston Stanley | Nzira yekumira sei uye kuwana CV yako yakacherechedza?
Kingston Stanley ne Dubai City Company
Iwe unogona kuve nebasa muAFA, Qatar kana Saudi Arabia
Kingston Stanley - Ungamira sei uye uwane CV yako yakaona?
Kingston Stanley - Kune avo vese avo vachakwikwidza vanonetseka kuwana mhinduro, kana kuti kubvunzurudzwa kubva pamabasa kunyorera, pano matanho mashoma angabatsira.
Rangarira maneja maneja, maneja wekutora kana mupi wezvekunyorera vashandi inowanzo zadzwa nemazana emaCV nguva zhinji. Zvinoshungurudza, vanoverengeka vavavhoterwa vane "nzira yekuparadzira" yekukoka uye vachatumira CV yavo kuita yega yega basa, kunyangwe kana isingakwanise bhiri. Ini ndinokupa zano kuti uite zvinotevera:
Tumira chete CV yako kumaroo aunofanana nawo zvizere, maererano nemitauro, ruzivo rwezvikamu uye makore echiitiko.
Verenga iyo mharidzo yose zvakanyatsonaka uye uone kuti iwe unobata mabhokisi ose.
Vashandi vekutsvaga vanongoda nguva dzose vanoda chaiwo maindasitiri ruzivo, sezvo mutengi wavo anenge achibhadhara mubhadharo wemutambo chaiwo.
Iwe unofarira kuchinja maindasitiri, ita saizvozvo mune imwe shizha rinoita, kana kuti enda zvakananga nemakambani (kwete nehurumende).
Paunenge uchinge watumira CV yako kumushandi.
Ramba uchitarira kune yako CV yatumirwa, ramba wakarongeka uye mepu musika nayo rondedzero yevanogona kushandira.
Enda kune zviitiko zveneetwork zvakadai seDubai Lynx, MEPRA, Cityscape, Gitex, Arabian Travel Market uye unosangana nevatambi vekutora sarudzo zvakananga. Kumeso kumeso kunogara kwakanyanya.
Pakupedzisira, chikamu chakaoma kwazvo che kubvunzurudza nzira ndeyekutora hurukuro. Kana izvi zvichishandurwa muve nechokwadi chekuti iwe unopedza nguva uchigadzirira uye haufaniri kubuda pasina kuita tsvakurudzo yako.
Shanyira Kingston Stanley
Tinogona kupawo mazano kana iwe wakachengetedza hurukuro
Yeuka kuita tsvakurudzo yako pane kambani. Verenga chikamu che "About Us" ye webhusaiti uye shandisa iyi ruzivo kana iwe uchitaura zvakananga nezve nei ungade kuvashandira. Usangotaura kuti iwe unoda kushandira nyika zhinji, kambani hombe kana yekutanga diki. Ita mhinduro dzako SPECIFIC kumutengi. Tarisa uone chimiro chekambani paWikipedia, se izvi zvichakuudza zvakawanda iwe zvaunofanirwa kuziva nezvavo.
Iva nenguva yekubvunzurudzwa. Nenguva zvinoreva maminitsi mashanu kusvika gumi kutanga. Kana zvichidikanwa, tora nguva yekutyaira kunzvimbo yekubvunzurudzwa mberi kwenguva kuti unyatsoziva kwauri kuenda, uye kwenguva yakareba sei zvinotora kuti usvike.
Zvishongedze Kubvunzurudza Kubudirira
Iva nechokwadi chokuti iwe kupfeka zvakakodzera kuti Hurukuro kubudirire Mufungo wekutanga waunoita pane waunogona kushandira anogona kuita mutsauko mukuru. Kutonga kwekutanga kunoitwa interviewer ichave inoenderana nemaitiro ako, uye neizvo iwe zvauri kupfeka. Ndosaka zvichikosha nguva dzose kupfeka zvakakodzera kubvunzurudzwa kwebasa.
1. Chii chaunoziva nezve kambani? - Ndedzipi dzakagadzwa, nzvimbo dzepasi rose hofisi, vashandi musoro-soro etc.
2. Chii chinokufarira iwe nezve basa iri? - Kana zvichikwanisika ita shuwa kuti unoziva mabasa kubva pane kutsanangurwa kwebasa
3. Nditaurire pamusoro pako-Mubvunzo uyu unoreva "ndipei pfupiso yakajeka yekuti ndimi ani, muchimiro chekutaura, tisati tapinda mune zvimwe zvinhu."
4. Nei tichifanira kukuhaya? - Funga nezve chako chakakodzera ruzivo / zvaunogona
5. Ndezvipi masimba ako makuru uye utera? Iva nemuenzaniso umwe kune umwe neumwe.
6. Ndezvipi zvinangwa zvako munguva yemberi? - Ita zvechokwadi / mafungiro emabasa
7. Nei urikusiira basa rako razvino?
8. Iwe unobata sei dambudziko racho? - Taura pamusoro pekuti unoisa sei mberi basa rako.
9. Ndezvipi zvaunotarisira mubhadharo?
10. Une mibvunzo ipi kwatiri?
Usangotaure chete runyorwa rwekukwanisa kugona. Taura nezve 1 kana 2 kiyi simba - iyo inoenderana nechinzvimbo - uye dzosera navo kumusoro EXAMPLES. Pasi pane mamwe mazano kwamuri;
1. Ndine hunyanzvi hwekunyora. Ini ndinowanzoisa pamwechete kuburitsa kuburitswa kwevatengi kana kushambadzira zvirongwa zvangu Directors, panguva pfupi pfupi.
2. Ini ndiri nyanzvi yekutaurirana uye ndinogona kutaura zvakanaka chiArabic neChirungu, ndine ruzivo rwakareba ndichishanda mune dzakawanda zvikwata zvakasiyana uye zvinobudirira.
Kukurukura kusava nesimba kwako mubvunzo unonyengera. Inobvunzurudzo inofanira NGUVA iva nepfungwa dzakanaka. Rangarira kuedza kushandura kushaya simba kwako kuve simba.
1. Ndine maitiro ekuti 'hongu' zvakanyanya kushanda kwakapfuura pandiri uye kazhinji kunozvichengeta ndakabatikana muhofisi kudzamara basa rapedzwa, kunyangwe kana risiri iro basa rangu.
INOKOSHA: Pakupera kwekushaya simba kunopera pane chimwe chinhu chakanaka.
Mibvunzo unogona kuvabvunza
Pakupera kwehurukuro Bvunza mibvunzo mishoma kuvaka chirahwe neanobvunzana, zvakaita se;
1. Chii chaunonyanya kufarira nezvekambani?
2. Ndeipi maitiro ekutonga, kana tsika yehofisi?
3. Vanhu vangani muboka?
Tsanangurira nzira yacho
Pane chero chinhu chaungada kuti ini ndiwedzerezve? Ndeapi matanho anotevera?
Kingston Stanley ndiye anotungamira nyanzvi yedhijitari, kushambadzira uye tekinoroji yekutsvaga vashandi iri kuMiddle East neUK, ichishanda chete nevatengi uye vavhoterwa mhiri kwese kuzere kwekushambadzira, digital uye tekinoroji zvikamu kubvira pakutanga 2011.
Isu tichakubatsira iwe kutsvaga, kutarisa uye sarudza yakakodzera mumiririri wako yakabatanidzwa kushambadzira uye tekinoroji mabasa, uye isu tine makuru, mazhinji azvino uye akakodzera network yevakakodzera kukwikwidza. Kunyangwe iwe uine basa rinofanira kukurumidza kuzadzwa kana kuuraya portfolio, iwe uchawana chauri kutsvaga pano. Hwakasimba hunhu, kutendeseka, kuvimbika uye kushanda nechinangwa ndiyo mbiru ina dzebhizinesi redu uye izvi zvinoratidza chiratidzo chedu, vashandi vedu uye nevanhu vatinomiririra.
Dubai City Company izvozvi kupa magiraidhi akanaka kune Mabasa muDubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Jobs in Dubai Guides. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.